သင်္ကြန်မှာ မေမြို့ တက်နားမယ် ဆိုပြီး ကားခ ဈေးကြီးတာနဲ့ မသွားဖြစ်ဘူး... van ကား နောက်ခန်းမှာ သုံးယောက် တင်တယ် တစ်ယောက်ကို ပုံမှန် အချိန်တွေဆို ၄၅၀၀-ကျပ်၊ သင်္ကြန်တွင်းမို့ ဈေးနည်းနည်း တက်တယ် ငါ့ညီရေ... ဘယ်လောက်လဲ မေးတော့ ၉၀၀၀-ကျပ်ပါတဲ့... အဲဒါနဲ့ မန္တလေးမှာပဲ နေပြီး အိပ်လိုက် စားလိုက် မီးလာရင် DVD ခွေကြည့်လိုက် ပျင်းလာရင် မဏ္ဍပ်လျှောက်ကြည့်လိုက်နဲ့ သင်္ကြန်တွင်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်... ကင်မရာ ရေစိုမှာ စိုးတာနဲ့ ဓာတ်ပုံ မရိုက်ဖြစ်ဘူး.... bagannat ကြီးကို အားကျပြီး ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ဆိုပြီး နောက်ဆုံး ၂-ရက်ကျမှ ဓာတ်ပုံ ထွက်ရိုက် ဖြစ်တယ်... အောက်ကပုံက အဲဒီထဲက ၁-ပုံပေါ့...
My labels: Thingyan, Water Festival, Mandalay Myanmar Burma Burmese News
မိုက်တယ်ဗျို့၊ ဒါပေမယ့် တစ်ပုံထဲပဲလားဗျာ..?
န်တိုင်းလွတ် ဒေသများ ထောက်ခံမဲ လိုက်ဆွယ်နေတဲ့နအဖ။
ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတို့၌ လေဘေးဒုက္ခသည်တွေ အလောင်းတွေ တောင်ပုံနေတဲ့အချိန်.မိဖမဲ့ ခလေးလေးတွေ..အားငယ် ငတ်ပြတ်နေချိန်..
ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကိစ္စ..ဘာများ အရေးကြီးတာလည်းဗျ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ မြို့နယ် ၄၀ နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ၇ မြို့နယ် တို့ကို ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်ဖို့မေလ၂၄ရက် နေ့ သို့ ပြောင်းရွှေ့ တာတောင် အလောင်းတွေ သဂြိ င်္ုလ်ရမဲ့ကိစ္စ။ ပတ်ဝန်းကျင်အညစ်အကြေး အမှိုက် တွေ ရှင်းလင်းရမဲ့ကိစ္စ။ နာမကျန်းသူတွေ ဆေးကုသရမဲ့ကိစ္စ။ ကြွင်းကျန်သူအိုးမဲ့ အိမ်မဲ့တွေကို ထောက်ပံ့ကူညီရမဲ့ ကိစ္စ.
ပဲခူးတိုင်း အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ နတ်တလင်းမြို့နယ်နှင့် မင်းလှ မြို့နယ် ၊ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ မန္တလေး တိုင်းတို့တွေမှာ အကြို ဆန္ဒမဲနှင့် ထောက်ခံမဲများကို မဲရုံးမှူးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့့နယ် ရယက များက လူထု အားခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မက်လုံးပေးခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ကောက်ခံနေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြတယ်.။
“ဘာအတွက်မဲပေးရမှန်းမသိတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို အမှန်သာခြစ်လိုက်တော့၊ ထောက်ခံမဲသာပေး လိုက်ပါ ဆိုတဲ့ ကလိမ်ကကျစ်နည်းနဲ့ထောက်ခံမဲပေးရအောင်ကြံစည်နေကြတယ်။'
ရဲများက လုံခြုံရေးလိုက်ပေးနေတဲ့ ၈၈၈၈ ကျောင်းသား ရွှေရည်စိမ် အေးလွင်နှင့်အဖွဲ့သည် ထောက်ခံမဲထည့် ရန် ရေးထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို လူထုကြားသို့ ဖြန့်ဝေနေကြတယ်။
သို့သော် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) အဖွဲ့မှ နယ်သို့ စည်းရုံးရေး ဆင်းသူများကို ထောင် ဒဏ် ၃ နှစ်နှင့် ကျပ်ငွေ ၁ သိန်းပေးရမည်ဟု အာဏာပိုင်များက ထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ ဝင်တဦးကပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းတွင် ထောက်ခံမဲများကို နှစ်ခါပေးရမည် ဟူသတတ်။
“ဝန်ထမ်းတွေက ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလည်းပေးရမယ်၊ ရပ်ကွက်မှာလည်းပေးရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဈေးချိုထဲမှာ ဆိုလည်း ဈေးထဲ မှာလဲထည့် ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း ထည့်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ ၂ ထပ်ပြန် ထောက်ခံမဲလို ချင်နေတာပါ.
မန္တလေးမြို့ အိုးဘိုထောင်ရှိ ရာဇဝတ်သားအကျဉ်းသား ၁၅၀၀ခန့်ကို ထောင်ပိုင်ကြီးနှင့်ထောင်မှူးတချို့တို့က ၎င်းတို့ရှေ့ မှောက်တွင် အမှန်ခြစ်ခိုင်းကာ စာရင်းများရယူသွားကြောင်း ။ မိထ္ထီလာနယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် တို့ မှာ ထောက်ခံမဲပေးရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မက်လုံးပေးခြင်းဖြင့် စည်းရုံးရေးဆင်း နေကြပါတယ်.
့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာတွင်လည်း “ယခုအခါ ပြည်လုံး ကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရန် ရက်ပိုင်းသာ လိုတော့သည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒမဲပေးရန်အတွက် ပြည်သူလူထုက စိတ်အား ထက်သန်စွာမျှော်လင့် ချိန်ဖြစ်ပါသည်” ဟု ပါရှိသည်။
လူအများ သေကြေ ပျက်စီးနေသော..သေကြေ ပျက်စီးလတ္တံသော.ပြည်သူများ အပေါ် ငဲ့ညှာမှု လုံးဝမရှ်ိဘဲ..ကိုယ်မြင်းကိုယ်စိုင်း..သည်မဟုတ်..သူများမြင်းကို အကျောကြီးနဲ့ ဌား၍ သေအောင် မြင်းစီးနေသော နအဖ အား တော်လှန်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း။ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
ပြည်သူ က နိူင်ငံတော် အာဏာကို သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်း။
အမေရ်ိကန် သမတ ဘွတ်ရ်ှက.လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားစာနာ စွာဖြင့် အမေရိကန်ရေတပ်အား မြန်မာနိုင်ငံ လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေုး လုပ်ငန်းများတွင် ကူညီပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရက မိမိတို့ ၏ ကူည်ီလက် ကိုလက်ခံပါက မိမိ တို့အဆင်သင့် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မုန်တိုင်းဒဏ်၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းစေမှု။ ရေသန့် စင်မှူ လုပ်ငန်းများ မပြူလုပ်နိုင် ပါကကူးစက်ရောဂါပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွါးပြီး အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ လူပေါင်းများစွာ သေကြေပျက်စီးဦးမည် ဖြစ် ပါ သည်။
အမေရိကန်ရေတပ်အား လိုအပ်မှူ အားလုံးပြင်ဆင်၍ မြန်မာအစိုးရ၏ နိုင်ငံတွင်း ကုညီရန် ၀င်ရောက်ခွင့် ခွင့်ပြုချက် ပေး မပေးကို စောင့်နေကြပါသည်။ လေတပ်မှ C -130 လေယာဉ်တင် စစ်သင်္ဘော ထိုင်းနိူင်ငံ တွင် အဆင် သင့်ပြင်ကာ အခြားသင်္ဘောတစီးက လမ်းခုလပ်တွင် လာရောက်နေကြောင်း လေတပ် ပြောခွင့်ဆိုခွင့် ရှိ အရာရှိ Megan Orton က ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ်တွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်တွင် ပြောကြားပါသည်။
" မြန်မာ အစိုးရက အကယ်၍ လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျွန်မတို့လေဘေးသင်ြ့ပည်သူတွေ ဘာလိုအပ်တယ်.ဘာ တွေ အလေးထားပြီး ကျမတို့ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ. ဒီလေယာဉ်ပျံတွေနဲ့သွားပြီး အရောက် ကူညီဖို့ ပါဘဲ။"
ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ တွင်အဆင်သင့်ရှိ်သော ရေတပ်သင်္ဘော များဖြစ်သည့်the USS Essex, the USS Juneau နှင့် the USS Harper's Ferry - တို့ ကလည်းအဆင်သင့် အနေအထားဖြင့် အမိန့် စောင့်ဆိုင်း နေကြပါသည်။
ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော The Essex သည် ကမ်းတက်သဘောင်္ဖြစ်ပြီး ရဟတ်ယာဉ် ၂၃ စီး၊ ( ၁၉ စီးမှာ သဘောင်္ပေါ်မှ ကုန်သေတ္တာများကို ကမ်းပေါ်အရောက် သယ်ပေးနိုင်သော ကုန်သယ်ရဟတ်ယာဉ် များဖြစ်ိပြီး. ကမ်းတက်တပ်သား ၁၅၀၀ အင်အားပါရှိပါသည်။
ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော The Essex သည် ၄ ရက်ကြာအောင် မုန်တိုင်းဒဏ်ကျ နေရာသို့ မောင်းနှင်ရ မည်ဖြစ်ပြီး သင်္ဘော မရောက်မီ စပ်ကြား ရဟတ်ယာဉ် များကို ကနဦး စေလွတ် ကူင်္ညီမှုကို စတင်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်.။ ရဟတ်ယာဉ် များသည် နာရီပိုင်းအတွင်း ရောက်သွားကြပြီး စစ်သင်္ဘော မရောက်မီ ကယ်ဆယ် မှုလုပ်ငန်း များကို စတင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ သော် မြန်မာပြည် နေပြည်တော်ရှိ လူကြီးလူကောင်း အမည်ခံ အာဏာရှင် များသည်. မိမိ မသေသေး သောကြောင့် လူတသိန်း ဘဲ ကုန်ကုန် ဆက်ရင်းနှီးရန် ၀န်မလေးဘဲ ဆက်လက် မိုက်မဲနေဆဲ..ကူညီရန် လက် ကမ်းသည်ကို..နတ်ပြည်မလိုက်ဘဲ မိုက်မဲစွာ ခုန်ချနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတခု တွင် အရေးကြီးဆုံးက ပြည်သူဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူအများဖွဲ့စည်း၍ သာ တိုင်းနိူင်ငံဖြစ်လာရပါသည်။ လူ တသိန်းနီးပါး (သို့ ) ကျော်လွန် သေကြေနေသော အချိန် အခါ၌ တွင်ပင်...ရာဇပလ္လင်ပေါ်က ဖျာ စုတ်ကိုမက်၍ မိမိ လူသေ နံ့ မရ..။ လူသေတာတွေ မမြင်ရ။ မိမိ အမျိုး မသေပါက.ရေငုံ နှုတ်ပိတ်၍ " ကုလားမကြား။ င့ါနား မကြား " အော်နေသော.ရှင်ဘုရင်ရူးတသိုက်အား . .ကျန်ရှိ်သော လူဦးရေ လူသန်း ၅၀ က..ပြန်လှန်ရန် မရဲသင့်သည်မှာ...အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း.။
စဉ်းစားကြည့်စေလိုပါသည်။ ငါနေသောနေရာ ပင်လယ်နား မနီးသော်လည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သည် နေရာတိုင်းတွင်ရှိသည်.။ အသက်ဘေးသည် စက္ကန့် တိုင်းတွင်ဖြစ်နိူင် ပျက်နိူင်သည်။ မိုးခေါင်။ မိုးကြီး ။ တောင်ပြို တောမီးလောင်. ငလျှင်။ ဆူနာမိ။ လေဘေး။ ရေဘေး။ ရောဂါဘေး အမျိုးမျိုးသော မမြင်ရသော ဘေးအန္ထရာယ်များသည် သင်နှင့် လက်တကမ်းတွင် ရှိ်ပါသည်.။
ဤ အချိန်တွင် ဒုက္ခရောက်သူ များကို နအဖ မကယ်လျှင်..
သင် တောင်ပြို၍ ပိနေလျင်...သရဏဂုံသာ မိမိဖာသာ တင်လိုက်ပြီး သေရန်သာ ဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာ မပုပ် သေးသ၍ နအဖ စစ်သားသည် ကယ်ဆယ်ရန် လာရောက်မည်မဟူတ်။
သင် သေသော်လည်း မြေမြူပ် သဂြိုလ်ပေးမည် မဟူတ်ဘဲ နီးစပ်ရာ ချောင်းမြောင်း အမှိုက်ပုံတွေ တွင် ခွေးသေ၀က်သေ ပစ်လိမ့်မည်။
အသိရကြပါ..ညီရင်း မောင် နှမများ..
အရက်မူး၍ ရမ်းနေသော..အစာငတ်ခံထား လှောင်ပိတ်ထားသော...အဖေအရင်းထက်...သနားကြင်နာ ထမင်းကြွေးသော အိမ်နီးနား သူငယ်ချင်းအပေါ် နားလည်ကျေးဇူးတင်တတ်ပါစေ။